सिक्किमका दाजु–भाउज्यूका पत्रहरु – Nepalmandal – Medium
सिक्किमका दाजु–भाउज्यूका पत्रहरु
Letter to brothers from Suryalal Pradhan, Sikkim
आफ्नो र आफ्नो परिवारको विगत बुझ्न यहाँ यी पत्रहरु प्रस्तुत गरिएको छ । खिकामाछा, टक्सार भोजपुरबाट दाजु सूर्यलाल तमोट (प्रधान, ई. १९३४–२०१७) २० वर्षको उमेरमा आफ्नो थातथलो छोडी परदेशिएर ई. १९६० मेमा पूर्वी सिक्किम रिनाकमा रहेकी मेरी भाउज्यू गोमादेवी वैद्य (प्रधान, १९४४)सँग विवाह बन्धनमा बाँधिएर त्यहाँ घरजम गरे । प्रस्तुत पत्रहरु ई. १९६२ मा रिनाकबाट भोजपुर आमा, बा र हामी भाइ–बहिनीलाई लेखेको र म ई. १९६३ मेमा काठमाडौं (ओभरसियर) पढ्न आएपछि लेखिएका छन् । यी पत्रहरुबाट उहाँहरुको आमा–बा प्रति सेवा भाव र हामी भाइहरुप्रति स्नेह सद्भाव प्रकट भएको छ । ई. १९७० पछि पत्राचार यदाकदा मात्र भए । त्यसले पनि दाजुको तत्कालीन मनस्थिति दर्शाएको छ ।
चिठ्ठीमा केही स्मरणीय प्रसंगहरु अङ्कित छ । म र भाइ भोजपुरमा ई. १९६२ मा पढिरहँदा दाजु–भाउज्यूले पठाएको रु॰ १० पाउँदा साह्रो खुशी भएका रहेछौं । ई. १९७० मा म पहिले दक्षबहाल, वसन्तपुर र त्यसपछि दुगंबहिल प्यूखा, काठमाडौंमा डेरामा बसेको रहेछु । दाजु–भाउज्यू रिनाक छोडी ई. १९८२ तिर सिल्भर फ्याक्ट्री खोल्न दक्षिण सिक्किम, जोर्थाङ हालको बासस्थल सर्न शुरु गरेको रहेछ ।
अहिले इमेल, इन्टर्नेट, फेसबुक आदि सामाजिक सञ्जालको जमानामा पुराना पत्रहरु पढ्दा सपना देखे जस्तो लाग्छ ।
सपना देख्नु रमाइलो हुन्छ । यी पत्रहरु विगत जीवनका ऐना जस्तो लाग्छ ।
श्री ६ पुज्यनीय मां बुवा,
तपाईंहरुको प्रिय जेठो छोरो औ बुहारीको सांझ–बिहानको शिर निहुराई शुभ सेवा ढोग । काका–मामजुकन हामीहरुको शुभ ढोग, गाउँघरमा जति छन् सबैलाई दर्जानुसार ढोग र सानाहरुलाई प्यार आशिर्वाद ! अनि घरका सबै परिवारलाई सुप्रेमाशिस छ ।
उप्रान्त — प्रिय भाई रत्नले पठाउनु भएको सुन्दर पत्र समयमा नै पाएथ्यौं । तर हामी Darjeeling घुम्न गएकोले गर्दा तुरुन्त पत्रोत्तर दिनु नसकेकोमा क्षमा चाहन्छौं ।
अं ! मांलाई चैं झट्टै यहां ल्याउने कोशिस गर्नु भए बढिया हुनेथ्यो । कति जना त्यस्तै रोगको मानिस अस्पताल लगेर जाति हुँदै आईरहेछन् । मा यहां आउनु भो भने नानीहरुको स्याहार हुँदैन बिरामी होइन्छ, स्वाभाविक हो । तर घरकै मात्र लथालिंङ्ग हेर्यो भने कतिले पनि पुग्दैन । जान्यो भने फुत्त घर बाट निस्केर हिड्नु असल सझन्छौ बाहिर आफ्नो जीउ जाति भयो भने आफैलाई सुविस्ता हुन्छ मलाई पनि साह्रो सन्चो छैन । झन जीउ जाति नभईकन त्यहां आउनु असमर्थ छु ।
अं ! माईली यस्तै छ भनेर डराउनु हुँदैन । जस्तै भए पनि बुहारी भई सके पछि कन्ट्रोलमा हुनु पर्छ (राख्नु) तपाईहरुको काम हो । धेरै के भनुं जानकारी तपाईहरु नै हुनु हुन्छ । मां कस्तो हुनु हुन्छ औ कमला–बिमला कस्तो छ ? सबै लेख्नु हवस ।
खै, माईलीले त एउटै पत्र पनि लेख्दिन किन ? विशेष मां कै सुर्ता लाग्छ । वहां कै याद आउँछ । झट्टै उपचार गर्नु भो भने जाति हुन्छ होला भन्ने आशा छ । तर यादै गर्नु हुन्न भने हाम्रो के लाग्छ र ।
यहां त साह्रै गरम छ । रिनाक को ‘निउज’ सबै राम्रै छ भन्नु कर लाग्यो । अब भोजपुरको सुनौलो नयां २ खबर सुन्न इच्छुक लागी रहेछ । हालमा “साहुजी” (जेठो छोरा) पनि जाति नै हुनुहुन्छ । वहांको भनाई — आमालाई बोलाई पठाएको खै आउनु हुन्न भन्नु हुँदैछ । हुन पनि त हो नि यहां आउनु भो भने हावा पानी फेरिन्छ, राम्रो स्याहार अस्पतालमा हुन्छ । झन रोग पुरानो भइ सकेपछि जति औषधी गर्नोस न केही पनि लाग्दैन ।
धेर के लेखुँ ? भूल प्रति क्षमा प्रदान !
तपाईहरुको जेठा छोरा औ बुहारीको ढोग ।
(अं ! मेरो बाकसको सबै लुगाहरु राम्रो गरेर राखि दिनु हवस ।)
प्रिय भाई काशीनाथ औ पुरुषोत्तम !
प्रेमाशिस …. उही परदेशी दाजु–भाउजु को । स्कूलको पढाई कतिको चल्दैछ । विदितै होला कि विद्या नै उन्नति को मूल मन्त्र हो भन्ने । जुन मानिसमा विद्या छ उसले जहां गए पनि दुःख पाउंदैन । आधुनिक विद्याको युग छ । पढाईमा ध्यान दिनु है ध्यान दिनु । अनि मांको खबर पनि लेख्दै गर्नु ।
उही दाजु–भाउजु ।
अर्को फाल्तु पत्र रामकिशोर चन्द्रमाया लाई दिनु ।
(१४ जेष्ठ, २०१९ आइतवार प्राप्त)
श्री ६ मां–बुवाकै चरणकमलमा, परदेशी छोरा बुहारीको साँझ बिहानको शिर निहुराई शुभ सेवा ढोग पत्रद्वारा बांची लिनु हवस । घरका सबै भाईहरु, बहिनी को छोरो बुहारीलाई शुभ आशिस । काका–मामजुलाई ढोग छ भनि सुनाई दिनु हवस । राम किशोर को बहिनीहरुलाई सुप्रेमासिश । अनि गाउँ–घरका सबैलाई हामीहरुको ढोग सुनाई दिनु हवस ।
उप्रान्त ः– तहांबाट पठाउनु भएको सुनौलो पत्र नियत समयमा पाएं, हर्षको सीमा रहेन, लेखि साध्य छैन । त्यसैले पत्रोत्तर आलै दिईरहिछु । भूल प्रति क्षमा प्रदान गरिबक्सियोस ।
मां हामीहरुको निम्ति सुर्ताउनु हुँदो रहेछ । व्यर्थमा किन आफ्नो शरिरलाई शोकमा दुबाउनु भएको ? हामी त मरेर गएका पनि छैनौं त । पत्र आवत–जावत भै रहन्छ त । सुर्ताउने काम चैं बिल्कुल नगर्नु हवस मां ! मंसीरमा आउनु भो भने राम्रो हुन्छ । घरबाट एक्कासी निक्लेको पनि राम्रो हुँदैन । साह्रै आतुस पनि खानु हुँदैन । माइली बुहारीले साह्रै गर्यो भन्दैमा तपाईंहरु साह्रै डराउनु हुन्छ । तर …. जस्तै भएपनि हर्ता–कर्ता तपाईहरुनै हुनु हुन्छ भने आफ्नो कब्जा ल्याउनु सक्नु हुन्न । डरायो भने आतुस खानु भो भने, लौ आ…यो त यस्तै छ भनेर मेख मार्नु भयो भने त तपाईको जिन्दगी नै राम नाम नगरि त्यतिकै रोएर नै बित्नेछ । मां ! मनमा सन्ताप लिने काम बिल्कुलै नलिनु होस । अं ! खर्चको लागी सुर्ता नगर्नु हवस । मंसीरमा आए हुन्छ । हामी औषधी गर्न तत्पर छौं । मनमा केही दुःख मान्ने काम नगर्नु होस । जे २ होला होला एक पल्ट चैं आई हाल्नु हवस है ।
म पनि साह्रै सन्चो छुईन । मैन्हा असार कि त जेठ पर्छ होला याद छैन । मेरो पनि दुई दुई तोलाको सुनको चुरा बनाएँ । अब नेकलेस अढाई तोलाको बनाउनु कुरा हुँदैछ । अरु हाल राम्रै छन् ।
तपाईहरुको छोरा बुहारी को ढोग !
प्रिय भाई काशीनाथ औ ………..,
सुन्दर पत्र पाएँ आनन्दको सीमा रहेन । यहि आनन्दको सिलसिलामा तपाईहरु प्रति एक अवला नारीले अरु के टक्राउन सक्थ्यो केवल हार्दिक धन्यवाद ।
पढाई विषय कुरा सुन्दा अत्यन्त हर्ष लाग्यो । बहिनी शुभलक्ष्मीले पनि यति चांडै विद्योन्नति गर्लिन् भन्ने संकोचै थिएन । तर अचम्भ छिट्टै उनले विद्या प्राप्त गर्न सकिन् धन्यवाद छ ।
कमला विषय ः– कमला अब हिड्न थाली भन्ने सुन्दा खुशी लाग्यो । भगवान प्रति बिन्ति छ कि छिट्टै उनीहरुको दुःख पार हवस ।
अनि ‘महेन्द्र पार्क’ बनाउदै होलान् । साथै बुधवार हाट लाग्छ भन्दा राम्रो भो ।
उही दाजु भाउजु ।
तपाईहरुले चिठ्ठी पठाउदा (तलको) ठेगानामा पठाए असल हुनेछ, अलि चाँडै पाउनेछौं ।
Goma Devi Pradhan
P.O. Rhenock Bazar
यहि ठेगानामा पठाउनु होला ।
श्री ६ पुजनीय मां बूवाकै चरणकमलमा तपाईहरुको जेठा छोरा, जेठी बुहारीको ढोग भेट । सबै भाईहरु बुहारी औ बच्चाहरुलाई सुप्रेमाशिस ।
यादमा, पत्र पायौं पछि सब हालखबर मालुम भो । बुहारी भाइले जीउ संचो भो भन्ने सुन्दा हर्क लाग्यो मांको चैं साह्रै सुर्ता लाग्छ । किन कसको हाल खबर गर्दै गर्नु हवस । विचारमा रुनु जोडले कराउनु, बेसी एकदमै हुँदैन । दिनभर कांचो कांचो अण्डा औ मह फिटेर खानु .. छ । हिड्डुल बेसी गर्नु हुँदैन । के गर्नु जानकार तपाइहरुनै हुनुहुन्छ । यहां म पनि साह्रै सन्चो …. पनि पैले बसेको किराया घरको कभर साईडमा सालको २०० रु॰ मा घर किराया गरि बसिरहेको विक्री बट्टा समय हेरि ठीकको छ ।
हाम्रो निम्ति केही सुर्ता नगर्नु हवस । अनि अर्को कुरा कारखाना पनि खोल्ने विचार गर्दैछौं । मैले ज्यावल (हथियार)हरु पनि कालिम्पोङ्ग देखि ल्यायौं । अब खोली काम गर्ने मानिस (कारीगरी) मात्र चाहिएको छ । विचार गर्दा यहां काम खोल्नेले निकैनै आम्दानी हुन्छ जस्तो लागेको छ । एक वष भित्र मा नै आफ्नै पूँजी पनि गर्न सकिन्छ । यहाँ अरु वर्तन दोकान छैन खालि हाम्रो मात्रै छ । अब व्यापारले गर्दा यस ठाउँ देखि उम्कने उपाय छाँत छैन र यहि कामधाम गरी बस्ने उपाय गर्दैछौं । एक खेप चैं त्यहां जीउ हलुङ्ग भए पछि मात्र आउछौं, केहि दुःख नमान्नुहोस । अरु हाल खबर सबै राम्रै छन् ।
भूल भए क्षमा प्रदान गरिबक्सीयोस । इति
तपाईहरुको छोरा बुहारीको शुभ ढोग ।
१४ असार २०१९, विहीवार प्राप्त
प्रिय भाई काशीनाथ औ (पुरुषोत्तम)
तपाईहरुको क्तगमभलत षिभ मा जुन कुरोको बेसी आवश्यकता छ, त्यसको कमीको कुरा सुन्दा हामीहरुलाई हुन सम्मको दुःख लागी रहेछ । खै ! गर्नु के … एक त दूर देशमा छौं, तपाईहरु न घबराउनु होस । स्टुडेन्ट जीवनमा जति दुःख भो उत्ति राम्रो हुन्छ । म पनि पहिले कस्तो किसिमले पढेथें, त्यो व्यतित घटना संझन्दा हृदय चकनाचूर हुन्छ । भकानो फुटेर आउंछ । तसर्थ अहिले त्यस्तो व्यतित कुरो लेख्न असमर्थ छु । छात्रावस्थामा छंदा दुःख भएकै राम्रो हो । मनमा केही कष्ट नराख्नु । १० रु दाम काशीनाथ र पुरुषोत्तमको निम्ति कापी किन्न लाई पठाउदैछौं । लिफाफा भित्र राखेर पठाउनाले धेरै पठाउनु डर छ । तसर्थ अलि २ गरेर पठाउनेछौं । जुन चै कुरो बाहिरको मानिसले लिफाफा भित्र पैसा छ भनेर चाल नपावोस राम्रो गरेर पढ्नु, बेसी संताप मनमा नलिन पढाई बिग्रने डर हुन्छ । धेर के लेखुँ, अरु पछि लेख्ने छुं ।
खै राम किशोर र चन्द्रमायाले त पत्र लेख्ने भुल्नु भएछ । लौ भै गो । इति
तपाईहरुको दाजु भाउज्यूको शुभार्षिवाद
पैसा हात परेको नपरेको तुरुन्त खबर दिनु ।
राम्रो पढ्नु लेख्नु, भोली पर्सी धेरै पढेछ भने म तिमीलाई राम्रो राम्रो लुगा जुत्ता मोजा घडी पठाई दिन्छु ल ।
(अगष्ट ९ मा प्राप्त)
श्री ६ माननिय, मां–बुवा कै चरण कमलमा
तपाईहरुको छोरा–बुहारीको सांझ–बिहानको शुभ–सेवा ढोग । साथै सबै भाईहरु बुहारी बहिनी औ छोरीहरुलाई सुप्रेमार्शिवाद । काका–काकीलाई पनि ढोग सुनाई दिनु हवस । नानी चन्द्रमाया औ सानालाई सुप्यार, आशिस ।
यादमा तपाईहरुले पठाउनु भएको पत्र समयमानै पाएथें, तर अपशोच ठीक समयमा उत्तर दिनु नपाएकोमा क्षमा याचना !
अरु हाल खबर सबै जाति नै छन् । म पनि माईत एक महिना हप्ता दिन बसेर आफ्नै घरमा आएँ । सानु नव–शिशु पनि जाति नै छ । मांको शरिर सदाको झैं छ भन्ने सुन्दा बिस्मात लागी रहेछ । चांडै औषधि गर्नु पर्ने हो । रोग छिपिए पछि बहुत खर्च पनि हुन्छ औ हतपत जाति हुन गाह्रो पर्छ ।
मंसीर अघि नै आउनु भए झन बढिया हुनेथ्यो, तर तपाईहरुको बिचार हो । जे होस एक पल्ट चैं आई हाल्नुहोस । नानी शुभलक्ष्मीलाई लिएर । यता–उती मन डुलाउनुभो भने मांले आउने बिचार छैन ।
धेर के लेखुं जानकार तपाईहरु नै हुनु हुन्छ । भूल प्रति क्षमा प्रदान ! अं ! माईलीको नानी पनि जाति नै होला, माईलो पनि जाति नै होला भन्ने आशा छ ।
हामीहरु पनि तपाईहरुको आशिर्वादले र उनै परमात्माको अनुग्रहले आजतक परदेशी जीवन खुसीसाथ बिताई रहेछौं ।
तपाईहरुको जेठा छोरा औ बुहारी
शोभालाई केही लेखेन भनेर रुई, भन्ने सुन्दा उसलाई प्यार छ ! नानी शोभा तिमी कतिको पढ्दैछौ । निनी जस्तै राम्रो मन लाएर पढ्नु । म तिमीलाई राम्रो २ चीज ल्याईदिन्छु ल ।
प्रिय भाई काशीनाथ ….. कन,
तपाईहरुको …….. दाजु भाउज्यूको सुप्यार ….. ! सानो नयां भदै बाट नौलो ढोग छ ।
यादमा कुशल छौं, तपाईहरुको पनि सोही माफिक चाहन्छौं ।
तपाईहरुले १० रु पायौं भन्दा हर्षको सीमा रहेन । फेरि पनि आर्थिक अवस्थाको कसो भयो भने खबर गर्नु हुनेछ । हामी पछि हटने छैनौं । मां–बुवालाई पनि बेसी तकलीफ दिनु हुन्न । के गर्नु दूर–देशमा छौं ।
बजारको हाल ः– बर्षातको समयले गर्दा दिन–दिनै पानी परिरहेछ । यहां धान रोप्नु धमाधम छ । कसैको रोपेर पनि सके । मकै पाकेर, सुकेर पनि भुटेर खाई सक्यौं । सायद वहां पनि पाक्यो होला नि ।
अ …. नि …..१५ ता. अगष्ट बुधवार देखि हप्ता दिन सम्म लाखे नचाउंछ । पोहोर साल त हामीले त्यहांको सुन्दर नृत्य हेरेथ्यौं, तर यो साल चै कुन देशमा अचम्भ लाग्नु स्वाभाविक हो ।
समय परिवर्तन हुन कहां विलम्ब छन् । आए गएको …… राख्दैन । अं, भगवानको दर्शन गर्न मानिसको लस्कर, त्यहांको पैह्रन, वातावरण चालचलन इत्यादि देख्दा यो मन त्यसै आनन्दित भएर आउँछ । के गर्नु घाम पुग्यो डांडामा मन पुग्यो भांडामा भने झै मेरो जीउ मन यहां छ, मन भने त्यही छ ।
पढाई कतिको चल्दैछ ? राम्रो पढ्नु यसपाली Half Yearly को नतिजा सुन्न पाउं ल !
तपाईहरुको भदै जन्मदा त नि २० सेर जति लड्डु बजारमा बाड्नु पर्यो । यहांको रिती यस्तै छ छोरा पाए पछि । धेर घीउ खायो भने तीतो हुन्छ त्यस्कारण धेर लेखी रामायण बनाउने काम छैन । इति ।
उही दाजु–भाउजुको प्यार
पुनश्चः तपाईहरुको दाज्यू ता॰ ३० सोमवार कलकत्ता घुम्नु जानु भयो । सायद १०/१५ दिनमा आउनु हुन्छ होला ।
स्नेहमय भाई काशी औ बहिनी भाई प्रति हामीहरुको …… प्यार ….
पत्र पाएँ, हर्षको समाचार लेखि साध्य छैन संधै नै यसरी नै हामीहरुको तडपी रहेको दिललाई पत्रद्वारा शान्त पारि दिएकोमा हार्दिक बधाई सिवाय अरु के लेख्न सकिन्छ ?
अं, पढाई कतिको चल्दैछ, तपाईहरुको ! Student life isagolden life यो त विदितै होला । सुनौलो छात्र जीवन चारै पट्टि आफ्नो इन्द्रियलाई नडुलाउनु जब जुन छात्रले बाहिरी कुव्यवहार पट्टि ढल्छ, तब त्यस्को छात्र जीवन देखि तुरुन्तै विदा लिने काम गर्दै छ भनेर जान्नु पर्छ । तसर्थ भाई हो ! आदर्श विद्यार्थी हुन मन लाग्छ भने देखि पढी गुनी संसारमा नाम बिकाउनु छ भने राम्रो पथमा लागी कन कुव्यवहार पट्टि नडुलाईकन सुमार्गमा लाग्नु भयो भने उन्नति गर्न केही बेर लाग्दैन । “उन्नति नै सभ्यताको मूल मन्त्र हो ।” अनि विद्या नै सभ्यताको खुडकिला हो ।
धेरै के लेखुं जानकार तपाईहरुनै हुनु हुन्छ ।
महेन्द्र पार्क कस्तो भयो ? खबर लेख्दै गरे बढिया हुनेथ्यो ।
उही दाजु भाउजु को ….
भाई हो ! तिमीहरुलाई परी आएको दुःख पीर मार्काहरु खबर पठाउँदै गर्नु, म तिमीहरुको साथमा नभएपनि परदेश बाट भएपनि मेरो जिन्दगी भर साहायता गर्दै जाने छु । तिमीहरुले कुनै हालतमा पनि आफ्नो सिद्धान्तलाई नछोड्नु ।
श्री ६ पुजनीय मां–बुवा कै चरण कमलमा दुरदेशी छोरा–बुहारीको शुभ सेवा ढोग । भाईहरुलाई आशिस, बहिनी छोरीहरुप्रति प्यार, बहिनी माईलीलाई आशिस ।
काका–काकी सपरिवारलाई ढोग छ । तीर्थ, भाउजू, अजी लाई पनि ढोग । साथै तल टोलको सिद्धराज–अजा–अजी सबैलाई ढोग छ भनी सुनाई दिने कष्ट उठाउनु हवस ।
उप्रान्त — बुवाले लेखि पठाउनु भएको सुन्दर पत्र नियत समयमा प्राप्त भयो, समयाभावले गर्दा पत्रोत्तर दिन विलंव भएमा क्षमा चाहन्छौ । मां लाई चैं भरसक भनेर अघि नै पठाउने काम गर्नु भए वेश हुनेथ्यो ।
खै — यहांको नौलो खबर केही छैन, भन्दा पनि यहां नगीचैको रेसो भन्ने खोलो बढेर एक जना मानिस बगायो । ठाउं२ मा पैह्रो जांदैछ अनि रम्फू टोपा खानीमा बस्ने काम गर्ने मेलट्रीहरु १५० जति अनि घर कोठाहरु पनि डुबाउ भयो भन्ने खबर सुनिन्दैछ । यहांको समाचार यस्तै छ ।
अब भोजपुरको नौलो मीठो समाचार सुन्नमा ईच्छुक छौं ।
बिक्री विषय — पहिले जस्तो साह्रै व्यापारको सिजन छैन । फेरि घर खर्च पनि बहुतै हुँदैछ । के गर्ने बाजार साईडमा दोकान थापे पछि Income tax भन्यो Collect ईत्यादिले गर्दा धुरुक्कै बनाउछ । अब अशोज, कार्तिक देखि मात्र अलि व्यापार पनि हुन्छ ।
हावा–पानी विषय — यहां छिन छिनै घाम लागीरहन्छ । पानी परेको छैन । अब त बिहान बेलुकी जाडोले सताउंछ । सायद वहां पनि उस्तै होला ।
मांको खबर चैं बारंबार लेख्दै गर्नु हवस ।
तपाईहरुको छोरा–बुहारीको सेवा ।
आमालाई छिट्टै पठाई दिने काम गर्नु हवस । हामीहरुको कर्तव्य बाबु आमालाई स्याहार सुसार गर्नु नै छोरा छोरीहरुको परंपराको काम हो ।
श्री ६ पुजनिय बुवा कै चरण–कमलमा मां औ छोरा–बुहारी, बहिनी सबै जहानको तरफबाट शुभ सेवा ढोग । भाई रुद्र, काशीनाथ, पुरुषोत्तम, बुहारी माइली साथै शोभा र कमला–विमला अनि सानो नव–शिशु प्रति शुभ प्यार औ आशिस । काका–मामजुलाई ढोग, चन्द्रमाया, किशोर सानालाई प्यार … । परानचा भाउज्युलाई अजीलाई पनि ढोग — तीर्थ, सूर्यलाई पनि प्यार । तलको सिद्धराज अजा अजीलाई सबैलाई ढोग सुनाई दिनु हवस ।
उप्रान्त — हामी कुशलै छौं । कुशलै चाहान्छौं । मांलाई Kalimpong हस्पीटलमा एक महिना राखी दवाई पानी गरी अलि खोकी पनि जाती जाति हुँदैछ । पैलेको भन्दा त धेरै कम्ती छ । X-Ray पनि गर्नु भो १२ रु लाग्यो । हेर्दा रोगको लक्षण केहि देखिएन, टी॰ बी॰ छैन भन्यो । खाली खोकी र सर्दी हो भन्यो । दवाई चैं गरिनै रहेछौं, चीसोमा हिड्न दिएको छैनौं । अब यो बर्षा भरि राखेर राम्रो दवाई पानी गर्छौं ।
तपाइहरु केहि धन्दा नमान्नु होला । बहिनी शुभलक्ष्मी राम्रैसित पढ्दैछ । मांले भन्नु हुन्दैछ कि माईलीलाई नानी मुनालाई राम्रो होशियारले हेर्नु आगोमा पर्छ कतै जान्छ । जस्तै दुख भएपनि राम्रो स्याहार गर्नु । बिमला नानी हिडदै छ कि के भयो, सबै नानीहरुलाई राम्रो गरेर हेर्नु । शोभा स्कूल जाँदैछ कि जाँदैन । चिठ्ठी नआएको धेरै भयो । मां साह्रै सुर्ताउनु हुँदैछ, यो चिठ्ठी पाउन साथै उत्तर पठाइ हाल्नु हवस । अन्तरे, कान्छा राम्रो गरेर पढ्नु कतै मन नडुलाउनु, बुवालाई मांले भन्नु हुँदैछ अन्तरे छोरा साह्रै रुन्दैथ्यो, बेला२ मा यसो खाजाहरु दिनु । अनि भाउज्यू चैले कोई बेला भ्याउँदैन सबै नानीलाई राम्रो गरि हेरी दिनु हवस । अं, आमालाई चैं वर्षा भरि यहां राखुँ भनेको के हुन्छ ।
नानी शंकरलालको सबैलाई ढोग । अर्को पाली फोटो पठाई दिन्छु ।
यहां मेला शुरु भयो । भूल प्रति क्षमा । मुन्नाको एउटा फोटो पठाईदेउ ल ।
SiKKim, Dt 16.2.63
श्री ६ पुजनीय बुबाज्युकन हामीहरु सबै जनाको शुभ सेवा ढोग । आमाको तरफबाट पनि ढोग । छोराहरुलाई र बुहारी, नानीहरुलाई पनि आशिस । हाम्रो तरफबाट भाईहरु र बहिनी भाईको र नानीहरुलाई प्यार ः–
उप्रान्त, तहांबाट बुवाज्यूले पठाउनु भएको सुन्दर हस्तलिपी नियत समयमा हस्त गत भएथ्यो, तर अपशोच ! पत्रोत्तर दिन अत्यन्त बिलम्ब भएकोमा क्षमा चाहन्छौं । भाईहरुले पठाएको पत्र पनि ताः १३॰२॰६३ बुधवार पायौं । हर्षको सीमा रहेन ।
अं ! आमाको बिमार अहिले अलि जाति हुन्छ कि जस्तो थ्यो । फेरी बलझयो । अब साह्रै भएन भने प्बष्mिउयलन अस्पताल भित्रै राख्ने कुरा गर्दैछौं । तर आमा चैं छिट्टै नै आउने कुरा गर्नु हुँदैछ । तर डाक्टरले भन्दैछ कि दवाई गर्दा गर्दै पनि न जानु, पूरा १ वर्ष बसेर मात्र जानु भन्छ । के गर्नु हं । अर्को कुरा कालिम्पोङ्गमा आमालाई एक महिना राख्ता त्यहां चैं खोकी अलि कम भएको थियो । यहां घरमा ल्याउंदा देखि फेरि विमार बलझ्यो । अब अस्पताल भित्रै राख्ने काम गर्नु पर्छ । आमाले त भरसक अस्पताल भित्र बस्दिन भन्नु हुन्छ, तर बस्नै पर्ने जस्तो लाग्छ । अब एभमयलन mभबि पछि राख्ने सल्लाह छ । रोग चै जाति भएको छैन । पूरा वर्षदिन राख्यो भने मात्र अलि जाति हुन्छ भन्ने आश छ । भगवानको दया ॰॰॰॰ !
मांले भन्नु हुँदैछ कि — साईलाको कोट पनि राम्रो राख्नु, कान्छाले ल्याको ठूलो बर्को पनि राम्रो राख्नु । बुवा को लुगाहरु माहिली बुहारीले राम्रो धुएर राख्नु, अनि मुन्नीलाई पनि राम्रो स्याहार गर्नु, बिमला, कमलालाई पनि हेर्नु, बाटोमा बसिरहन्छ । अन्तरे छोराले चिठ्ठी लेखि पठाएन, पारी जान्छ कि जाँदैन ।
उसले किन चिठ्ठी लेखि पठाएन । के भयो ? सबै राम्रो गरेर लेख्नु ।
अर्को कुरा जेठा पनि साह्रै घरमा बस्दैन । अलि टाकान टुकुन काम गर्छ उसैलाई पुग्दैन । साह्रै काम पनि छैन । अलि२ काम उसैलाई ठिक छ । म चैं भरसक दशैंलाई आउंछु भनेको, सकेन भने मंसीर नसकि कन आउंदिन । डाक्टरले पनि नजानु भन्दैछ ।
अनि बहिनी शुभलक्ष्मीलाई School भर्ति गर्यौं, बिहान, बेलुकी ट्युसन पढ्दैछ । शान्तीले पढाउन भ्याईन । कारण Gangtok मा पढ्न गइन् । उ नवम श्रेणीमा छिन् । नानीले अब त ABCD पनि राम्रै पढ्न र लेख्न जानिन । AM A Man An Ant पढ्दैछिन् । २ देखि १६ को गुणा जानिन् । आजकल धेरै नै पढि सकी । शंकरको फोटो अर्को पालीको पत्रोत्तरमा पठाउने छौं ।
जेठीको ढोग ।
श्री ६ बुवा दाजुहरु भाउजुलाइ शोभा कमला बिमल मुनालाई प्यार
यादमा म याहां अंग्रेजी ABCD A A MAN मा पढ्दैछु बिहान बेलुका पढ्छु । आमाको बिमार उस्तै छ । अब अस्पतालमा राख्ने कुरा छ, सबै जान्छौं । शंकरले मलाई पछ्याई रहंछ । राम्रो छ । अर्को पाली फोटो पठाईदिन्छु ।
तपाईको लक्ष्मी छोरी
दुई तीन वर्ष भाउजुले नजा भन्दैछ । आमालाई पनि नपठाउनु मलाई यहि नै राम्रो लाग्छ । अब यहिं बस्छु ल । के गर्नु बुवाले लेखि पठाउ । म दुई क्लासमा लागें
छिट्टै उत्तर पठाउनु होस ल !
प्रिय भाई काशी
उही भाउजुको अशेष प्यारार्शिवाद ।
धेरै वर्ष पछि भाईको पत्र पाउँदा अति हर्ष लाग्यो ।
तपाईको कामदाम राम्रै चल्दैछ भन्ने सुन्दा खुशिको सीमा नै रहेन । राम्रो इमानदार संग काम गर्नु भो भने सबैको राम्रो हुनेछ । आफ्नो मान बढ्दै जानेछ ।
शंकरको भाई वा बहिनी कोई पनि छैन, भएको छैन ।
आमाको विमार (खोकी) धेरै कम भएको छ । तर खानामा राम्रोसंग बारेन भने चै रोगले सताउँछ । बिहान, बेलुकी दूध दिने गरेकी छु । म आफैले घरमा गाई पालेकी छु । बुवा–आमालाई कुनै प्रकारका दुःख छैन । यहाँ दशैं सम्म रहनु हुन्छ । तसर्थ तपाई पनि यसपालीको दशैं लामो विदामा यतै आउनु होला ।
शंकर स्कूल जान थाल्यो । अलि२ लेख्न सिक्दै छ । अब त निकै नै ठूलो भयो । दिक्कै नै दिन्छ । हामीहरु जाती नै छौं ।
तपाईको शरिरमा आराम भए राम्रो मन शान्त रहला ।
पु ः भोजपुर सुकु बाजेको छोरो धर्म कुमारको पनि परलोक भएको खबर सुन्नु भएकै होला । अनि मेरी यहांको मुमा देवी कुमारीको देहान्त भएको खबर पनि विदितै होला ।
धेरै लेखिन ।
(Replied — 24/2/70)
Received your letter dated 14th Jan. ’70, but could not reply in time. I beg to excuse me for this delay.
I have already received my parcel, which you had sent from Dharan-Biratnagar. Really I am very much obliged, or grateful to you for the parcel.
What about my migration certificate ? Please, try to send as soon as possible. You know that I may not be able to appear in my final examination without submitting that above said certificate. I am sure that you will help me for the same. My college will re-open on 15th, instant after winter vacation.
Regarding “Bahiniko yo Viraha Vyatha” — we have thought to be published from here. You may print the cover according to your whish send the fare copy of the book. I have also desired to enclose one of my poems, ‘To my sister’, in the same book. What is your opinion ? — let me know.
Our brother S.L. and his friends are talking to come (to visit) there in Kathmandu on the occasion of auspicious marriage of Crown Prince, Birendra. They will move on 23rd instant from here, and will arrive there on 25th or 26th. You please send all about the directions how they will be able to meet you then and there. I hope, you will talk all about the matters when our brother will come there.
I will send the stamps and the ‘Kanchanjungha’, Special Sikkim Issue to our brother.
I am going to Gangtok on this coming Monday to participate in the ‘All Sikkim Sahityik Gosthi’ and coming back on Wednesday. It is the first chance in Sikkim to meet such Gosthi in which most of the prominent poets and writers are taking part.
Other news — not so important. …….On Jan 24, nearly 50 Boarder road labourers died due to the blasting of the hill at Rishi (Pedong side). You might have heard the disturbances of Siligurhi and Kalimpong, where the two communities, Bengali and Nepali were fighting each other because of the death ofaNepali postman named Ram Bahadur Tamang.
More in my next. Here, we are pulling on well with sound health and also want the same to you. O.K.
Hoping an early reply,
I have written this letter in English. Please, don’t mind. PP.
पक्का विचार गर्दैछु, आउदो २३ तारीक सोमबार मेरो साथ तीनजना साथीहरु लिएर काठमाण्डौ आउदैछु भन्नु सक्दीन तहाँ २५ तारीक या २६ तारीक कुन दिन हुन्छ आई पुग्छु है याद गरनु । अरु बहीनीको विरह व्यथा कविता बारे तहाँ नै कुरा गर्नेछु ।
Sri Kashinath Tamot
5/823 Daksha Bahal,-bIf axfn_
Rhenock, E. Sikkim.
Sis, Shanti also coming to Kath. Along with our bro. and his friends.
ता ः ३०–४–७०
(प्राप्त 5–3–70 /२०२७।१।२२।३)
प्यारो भाई काशी
धेरै२ दिनमा चिठ्ठी लेख्दैछु ।
दाजु सुविस्तै साथ घर आइपुग्नु भयो । तपाईले राम्रो संग बुझाउनु भयो भनी कुरा गर्नु हुन्छ । तपाई माया तथा संझना गरी पठाउनु भएको खुवा, चाकु मज्जा संग खायौं । अनि नेपाली चप्पल पनि खुशी साथ ग्रहण गरें । मलाई अपार हर्ष लागी रहेछ ।
तपाईले शान्तीलाई पठाउनु भएको पत्र साथै किताबहरु दिएँ । हालमा उनलाई यहाँ चिठ्ठीहरु नलेख्नु होला । उनि हालमा नाम्ची पश्चिम सिक्किममा गुरुमा छ, काम गर्न गएकी छिन् । म उनलाई ठेगाना भनी पठाउने छु ल ।
अरुको हाल राम्रै नै छ ।
वहां पनि राम्रै नै होला ।
धेरै लेखिन ल ।
पुन ः भोजपुरबाट बहिनीले चिठ्ठी लेखेकी थिइन । फेरि ७ कक्षा देखि पढ्न थाली रे । अति खुशी को कुरो … ।
5/823 Dakchha Bahal
Basantapur. Kathmandu, (Nepal)
Goma Devi Pra
प्यारो भाई काशीनाथ –
सुभार्शिवाद तथा संझना ।
२६ जुलाईमा लेखि पठाउनु भएको पत्र पायौं । पत्रोत्तर विलम्ब भएकोमा गुनासो नमाने है ।
बालख पत्रिका तपाई पठाउन भएको मात्र हो । अरु महीना महीना आएको छैन । के कारण पर्यो ?
पुरु…को पढाई राम्रै होला । एक महीना भयो केही खबरै लेख्दैन । कोनि॰॰॰ यसपालीको भ्हबmमा त पास हुनु भयो ।
शंकरले चैं परीक्षामा हावा खायो ।
दशैंमा आउने कुराले खुशी छु । सायद, तपाई आउनु भयो भने मात्र दाई जानु सक्नु हुन्छ । नत्र त कमजोरी ले जानु मुश्किल छ ।
तपाई आउनु हुंदा नेपालको पोते राम सीताराम भन्ने सुनौलो रंगको ५ लुङ्ग र अरु रानी पोते २०/२५ लुङ्ग लिएर आउनु हुनेछ । अनि चाइनिज कोट भए पनि ब्लेजर भएपनि ल्याउनु पर्ला । पैसा झट्टै मगाई पठाउनु हवस । दाम कति पर्छ होला सोधेर झट्टै खबर दिनु हुनेछ । चाईनिज कोट या स्वेटर दाईलाई ल्याई दिनु भनेको त भुल्यो रे ।
धेर लेखिन, पैसा कति लाग्छ झट्टै खबर गर्नु हुनेछ । अनि बढिया जडिवाला लाछा ५ दर्जन जति पनि ल्याउनु पर्ला । पैसाको खबर झट्टै गर्नु हुनेछ लौ ।
हामीहरुलाई राम्रै छ । तपाईको शरिरमा पनि राम्रो चाहान्छु ।
पत्रोत्तरको आशामा छु ।
प्युखाटोल, काठमाण्डौ ।
२१ अगस्त, १९७०
आदरणीय दाजु भाउज्यूकै,
सादर ढोग !
चिठ्ठी पाएर खुशी भएँ ।
‘बालक’ किन नपठाएको भनी सोधेको छु । बिर्सेको भए पठाउला । बाटैमा हराए के गर्ने ?
शंकरले हावा खाएकोमा छक्क छु । उसलाई सम्झाई बुझाई पढाउनु पर्यो । मलाई चिठ्ठी लेख्न लगाउनुहोस् ।
दशैंमा आउँदा पोते ल्याउने छु । तपाईलाई स्वेटर राम्रो होला भन्ने ठान्छु । अचेल चाइनिज कोट, स्वेटर छैन भन्ने सुन्छु । दशैंसम्म आउला । ऊन छ रे ! के उन ल्याए हुन्छ ? चाइनिज बाहेक हङ्गकङ्ग, जापानतिरको हुन्छ ? नाइलनको ल्याए कसो होला । भर्सक कुन रङ्ग ? साइज भन्नुपर्ने त हुन्न ? चाँडै जवाफ पठाउनुहोस् । ‘लाछा’ भनेको केशमा राख्ने धागो हो ? चिठ्ठी नआए पनि आफ्नो मनले म केही त ल्याउने नै छु तर जवाफ फर्के झन् राम्रो हुन्थ्यो ।
सामान किनेर ल्याउँदा लाग्ने खर्च बारे — पैसा नमगाउने बिचार गरें । त्यसबेलासम्ममा मसङ्ग १॰१/२। २ सय रुपिया निश्चय हुनेछ र म ती सामान किन्न समर्थ हुँला । मलाई त्यसैबाट घर जान र फर्कन चाहिन्छ र त्यसको लागि मैले जोगाउनु पनि पर्छ । बस् मलाई यसै खर्चेको त्यहाँ सोधभर्ना गरिदिनोस् भैहाल्यो । त्यहाँबाट यहाँ पैसा पठाउन पनि त गाह्रो छ नि ।
पुरुको पुस्तक ‘मुटुभित्रका आवाजहरु’ को परिचय ‘दियालो’ (जुलाई, १९७०) मा पाएर खुशी छु, राम्ररी दिएको छ ।
“बहिनीको यो विरह–व्यथा” सार्न नसकेको देखेर आफै छक्क छु । कभरको लागि फोटो खिचाइसकें । नेगेटिभ पठाउने छु । अगस्त भरि सार्न जाँगर आउला कि । म त्यहाँ अक्टोवर पहिलो हप्तामा पुग्छु ।
बढता के लेखुँ ? चाँडै चिठ्ठी लेख्नोस् है ।
सुभार्शिवाद तथा धेरै२ संझना ….. !
तपाईको पत्र आगे पाएँ । र झट्टै खवर दिइरहिछु । ता॰ १ अक्टोवरमा आउने खबरले खुशी छु । म प्रतीक्षा गरिरहनेछु ल ।
लाछा कपालमा बाटने । फुर्कामा जडी भएको । स्वेटर जापानी हङ्गकङ्ग कुन असल हुन्छ त्यो आफै विचारेर ल्याउनु भए वेश हुनेथ्यो । रंग भरसक नेभीब्लु या बैगुने रंग नभए अरु कुन राम्रो हुन्छ हेरेर ल्याउनु हुनेछ । साइज ३७÷३८ ठिक हुन्छ होला । नाईलोन होईन ल । पैसा ठीक पारेकी छु ।
खै ! दाई जानु हुन्छ कि हुन्न । तपाई आउनु भए पछि मात्र टुंगो लाग्छ ।
भेट भएमा बातचित होला त ।
तपाईको माया गर्ने भाउजु
दैनिक ढोक बिन्ती छ ।
मेरो दाजु शंकर लाल प्रधान काठमाण्डौ आउनु हुदैछ । ठण्डा महिनाको छुट्टीमा त्यँही बस्नु हुन्छ होला । यहाँ बुवा मुमा सबै जातिनै हुनुहुन्छ । अनि भाई बहिनी सबै जातिनै छ । म पनि यसपाली ज्ञकत भए र ठ मा गएँ । अनि भाइ बहिनी पनि पास भयो । म पनि काठमाण्डौ आउन मन परेको थियो काकाहरुले कहिले बोलाउनु हुदैन ।
तपाईको छोरा र्धुव लाल प्रधान
प्यारो भाई बुहारी प्रति हामीहरुको शुभासिस
छोरो एलेम्बरलाई प्यार, शंकर आफ्नु साथीहरुसित काठमाण्डु आउदैछ । तपाईहरुले राम्रो सित मुख्य २ जग्गाहरु देखाई दिनु हुनेछ । अनि बस्ने सुत्ने प्रबन्ध पनि राम्रोसित मिलाई दिनु हुनेछ । किनभने सिक्किमबाट कलेजका केटाहरु हो । तपाईले राम्ररी नै प्रवन्ध मिलाउनु नै हुनेछ भन्ने पूरा२ आशा राखेकी छु ।
मुना पनि यहि नै छ । यहां नानीहरु सबै पास भएर दाजुले पनि सिलवर फेक्टरी जोरथाङ्गमा खोल्नु हुदैछ । एकपल्ट बुहारीलाई पनि लिएर आउनु होला ।
यहांको हाल खबर सबै राम्रै छ । सबैलाई सन्चै छन् । त्यहां पनि सबैलाई आरामीको कामना गर्दछु ।
चिठ्ठी पठाउनु नभुल्नु होला ।
हाम्रो फोटो पठाउदैछु भाईटिकामा खिंचेको सारै राम्रो भएको त छैन ।
तपाईहरुको दाजु भाउजु
Gm सुर्यलाल प्रधान
सुर्यलाल प्रधान, जोरथाङ्ग साउट सिक्किम
घरको फोन २५७०७५
नाम्ची धु्रवको ससुराको
२६३५०३ कोड न. ०३५९५
धु्रवको मेरो मोबाइल नं — १९४३४१–८६४१५
मलाई नेपालको देउपुजामा आउनु सारै सारै रहर लाग्छ कसैले कैले खवर गर्दैन मैले पहीला देखी भन्दै थिए मलाई देउपुजा मा कसै गरेर पनी बोलाउनु खवर पाउने बितीकै तुरुन्त आउछु भनी बार बार भन्दै ल्याएको थिए ।
तर नेपालको जम्मै मानीसहरु स्वार्थी मतलवी कप्ती वैगुनी अरकाले थुप्रै खाईदिन्छ भनेर कसैलाई खवर गर्दैन ।
हामी पनी यहांबाट नेपाल आउदा २।४ सौ हजार रुपैंया खर्च हुन्छ त्यसै त खादैन खर्च गरेर आएर खान्छ पैसै लागेको दिन्छ अरु केही होईन हामी तारो बसेकोले गर्दा सबैले हेपेको हो ।
(धरानमा भाइ रुद्रप्रसाद ताम्रकारलाई लेखेको । ई. २००४)
गणेश एल्मुनियम इण्डस्ट्रीज
भाइ रुद्र बुहारी बन्धु सबैलाई आशीरवाद हामी सबै जना एलम्वरको विवाहमा आउछौ ।
कार्ड पठाउदा नाम्ची रेखा जुवाई
जोरथाङ्गको शंकर प्रधान
स्याम प्रधान डारागाव
डिव्वी प्रधान लाई पनी कार्ड लेखेर पठाउनु
(धरानमा भाइ रुद्रप्रसाद ताम्रकारलाई लेखेको । ई. २००७)
Sitting : left to right — Ratna Bahadur, Visnu, Gomadevi, Suryalal Pradhan, Standing : Dhanalaxmi, Maya, Bikash Pradhan, during Vratavandha of Yalamber Tamot, 13 Feb, 1994 Kathmandu.